जूता: चयन गर्न कसरी र के लगाउन
"कुनै खराब मौसम छ," - प्रसिद्ध गीत को शब्द मा भने। तथापि, वास्तविकता मा, हामी अक्सर बन्द-सिजन, अर्थात् वसन्त र शरद ऋतु मा, उज्ज्वल सूर्य तेजी बादल र वर्षा खतरा बदलिएको छ भन्ने तथ्यलाई सामना गर्दै हुनुहुन्छ। मौसम सबै vagaries मार्फत जाने, तपाईं बस Demi गुणस्तरीय जूता आवश्यक छ।
त्यो जो धेरै हदसम्म तापमान र चिस्यान परिवर्तनको यसको स्थायित्व, adaptability निर्धारण, जूता गरे। जूता वा जूता लागि सामाग्री को सर्वोत्कृष्ट भेद - यो गरेको छाला। को छाला जुत्ता खुट्टा मा एक घमाइलो दिन तातो हुने छैन, र चिसो मा hypothermia बाट रक्षा हुनेछ। छाला छ एक drawback छ: यो मात्र होइन हावा तर पनि पानी बित्दै। को puddles मार्फत यी जूता मा एक पैदल लिएर तपाईं भिजेको खुट्टा को जोखिम चलाउनुहोस्। तर, यो समस्या निर्माताहरु लड्न सिकेका छन्। Demi-सिजन जूता छाला अक्सर एक विशेष चिस्यान विकर्षक पूरण छ।
प्याटेन्ट छाला भित्र पानी छ, तर यो अत्यधिक चिस्यान को डर छ। तपाईं लाह जूता खरिद भने, त्यसपछि लगातार जूता हटाउन हुनेछ जो एक नरम कपडा, संग शेयर। वार्निश सुरुचिपूर्ण देखिन्छ, तर यो पनि सनकी र छोटो-बस्ने छ।
साबर - सबैभन्दा नाजुक सामाग्री। साबर बनेको जूता स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण हेर्न। तर, तिनीहरूलाई लागि यो आवश्यक ध्यान हेर्न छ। पनि बन्द देखाउन कि सम्झना साबर जूता भिजेको मौसममा।
कृत्रिम छाला देखि Demi जूता पर्याप्त गुणवत्ता को हुन सक्छ। तर लामो यो तपाईं, र यो खुट्टा निरन्तर डराएको छन् पछिल्लो हुनेछ।
जूता लागि दोकान मा
किन्न जाँदै छन् जूता को एक जोडी मा प्रयास गर्न निश्चित हुनुहोस्। पैड को सुविधा कदर गर्न स्टोरमा यसलाई हिंड्न। आफ्नो खुट्टा सुनिंनु झुकाउ छन् भने पसलमा साँझ, आकार miscalculate छैन ताकि जानुहोस्।
पनि हामी सबै भन्दा मानिसहरूको खुट्टा फरक लम्बाईहरू छन् दुवै जूता प्रयास गर्न सुझाव दिन्छौं। Demi जूता बरफ मा झर्ने तपाईंले बीमा गर्न अचानक चिसो तस्वीर गर्न एकमात्र एक थोडा नालीदार सतह हुनुपर्छ।
- एडी उचाइ स्वाद को एक कुरा हो। निस्सन्देह, दैनिक पहनने चयन गर्न राम्रो छ लागि पनि उच्च छ। पनि हामी एक एडी स्थिर फारम एक जुत्ता खरिद गर्न सुझाव दिन्छौं। लामो स्टड राम्रो पक्षहरू लागि आरक्षित गर्न।
महिला Demi जूता: प्रकार र विशेषताहरु
महिला जूता को दायरा धेरै व्यापक छ। को समतल मा तपाईं हरेक स्वाद र बजेट अनुरूप एक मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। महिला Demi जूता कस्तो अवस्थित लागि?
Booties - हाल को वर्ष मा एक प्रवृत्ति। कुनै पनि Fashionista केवल आफ्नो दराज तिनीहरूलाई हुनुपर्छ। टखने जूता - यो केवल टखने कवर एक छोटो पैदल जूता छ। तिनीहरूले जिप गर्न सकिँदैन, बेल, clasp। मोडेल टखने - धेरै फरक, तिनीहरूले कुनै पनि सामाग्री को बाहिर छन्।
विकल्प भारी छ, तर यो केही nuances विचार गर्न आवश्यक छ। पूर्ण र छोटो खुट्टा को एक उच्च Bootleg contraindicated मालिक संग टखने जूता। यस्तो महिलाहरु सकेसम्म धेरै खुला जूता लागि थप उपयुक्त हो। Svelte सुंदरियों को किन्न सिफारिस गरिएको छैन मञ्चमा जूता वा विशाल सजावट को एक ठूलो संख्या संग।
जूता जूता गर्न केहि समान छन्, तर एक उच्च टखने छ। यस्तो जूता gracefully पतली calves र सारा खुट्टा बनाउन सक्षम छ। जूता उत्कृष्ट भएको टुकडी स्कर्ट गोडा-लम्बाइ लागि उपयुक्त छन्। यस्तो जूता संग Breeches असम्भव कुनै पनि मामला मा संयोजन।
को जूता लागि को रूप मा, जूता यस्तो मोडेल सामान्यतया हरेक महिलाको दराज मा उपस्थित डेमी। किनभने यो संग संयुक्त गर्न सकिन्छ यो एकदम बहुमुखी हो एक स्कर्ट, प्यान्ट, जीन्स, tunics र कपडे। पूर्ण मिलान जूता छविको हाइलाइट हुन र तपाईं irresistible बनाउन सक्छ। तिनीहरूले सम्पूर्ण लम्बाइ साथ तंग-उपयुक्त खुट्टा छन् भनेर तिनीहरूलाई चयन गर्नुहोस्।
आधुनिक शैली र सान्त्वना - एक हुड संग महिला ज्याकेट
कसरी घर मा उसिनेर जीन्स बनाउने?
फैशन इतिहास: पोशाक को गोथिक शैली
गुलाबी स्कर्ट: के लगाउन राम्रो छ?
अल्ट्रालाइट संग मत्स्य पालन: उपकरण, चारा, गियर र सामान। Ultralaytovy कताई Shimano ( "Shimano")
पानी opossum - opossum कि पानी बसोबास
गेरानियम सुगन्धित - यो गेरानियम को क्रमबद्ध छैन
युक्लिड गरेको पाँचौं अभिधारणा: को शब्द
नागरिक कार्यवाही: अवधारणा, प्रकार, चरणमा। नागरिक कार्यवाही र आफ्नो सुविधाहरू चरण
प्रभाव हटाउन: को gallbladder हटाउन। को पित्त थैली हटाउन पछि उपचार
माउन्ट पशु अ Amani युद्ध सह
कसरी 20 वर्ष एक नगद ऋण प्राप्त गर्न?
तिनीहरूलाई कसरी आकर्षक फिर्ता गर्न छोटकरीमा सजाने?